ပင်မစာမျက်နှာ > သက်သေခံချက်
မစ္စ Mascha Fujimoto အငြိမ်းစားယူ
အရီဇိုးနား၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မတ်လ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၁
ဆီယက်တဲလ်, USA မတ် 12, 2021
David Roper ဆေးရုံ IT ဒါရိုက်တာအငြိမ်းစားယူခဲ့သည်
Blythewood SC, USA, မတ်လ 3, 2021
Antonis N. အငြိမ်းစားအင်ဂျင်နီယာ
Patras, ဂရိဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
e-automatyk ul ။ Leśna 17C, ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်၊
Vicor Ramón RG အိမ်တွင်းအလုပ်
Leioa, Bizkaia, စပိန်၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၀
Lucy Gold အငြိမ်းစားသိပ္ပံပညာရှင်
ပဲရစ်, ပြင်သစ်စက်တင်ဘာလ 21, 2020
တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀
Borsbeek, ဘယ်လ်ဂျီယံသြဂုတ်လ 30, 2020
Los Angeles မြို့, CA, USA, ဇူလိုင်လ 17, 2020
ဟူစတန်၊ တက္ကဆက်၊ အမေရိကန်ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀
စိန့် Albans ။ ယူကေဇူလိုင်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းဇွန်လ 2nd, 2020
သင်၏ Exchange ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆော့ဝဲသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး Champ တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေလ 9th, 2020
DataNumen tool ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ A + ကုန်ပစ္စည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Calgary, AB, ကနေဒါ, မေလ 8, 2020
ရိုမေးနီးယားAprilပြီလ 22, 2020
Ken Mantey အငြိမ်းစား GE Lighting
Chesterland, OH, USA, သြဂုတ်လ 8, 2019
မီလန်, အီတလီမတ်လ 16, 2020
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ငါ sql ဒေတာဘေ့စပြုပြင်ရန်သင်၏ software ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။ သင်၏ကိရိယာများကိုလည်ပတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ 🙂
ငါ l ကိုစဉ်းစားပြီးပြီဖြစ်သောအီးမေးလ်အကွက်ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ostExchangeNet Recovery software နှင့်အတူ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်မှ DataNumen အသင်းအဖွဲ့!
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16th, 2020
တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန်နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်၊
သင်၏ကိရိယာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Excel ဖိုင်ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်အားအမှန်တကယ်ကူညီသည်။
Tomasz Warmuz နည်းပညာဒါရိုက်တာ Landis + Gyr Poland Sp ။ z oo
Poznań, ပိုလန်မေလ 20, 2019
Luca DM Cogeor အတိုင်ပင်ခံ
ရောမ, အီတလီ, Aprilပြီလ 10, 2020
ဒီအစီအစဉ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကြီးတစ်ခုအောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပစ်ရန်ကအသုံးပြုခဲ့သည် OST ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အီးမေးလ် ၁၅၀ ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ဖိုင်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မင်းရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ost အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေ့နှင့်ထူးချွန်တနင်္ဂနွေ !!
Asheville, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားမေလ 10, 2019
စကားမစပ်, သင့်ရဲ့အများကြီးကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ကျနော်တို့ဝယ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ Datanumen Exchange Recovery မနေ့ကကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နေစဉ်သင်ပေးခဲ့သောအလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 29, 2019
ပြင်သစ်Aprilပြီလ 23, 2019
ဒီကိရိယာကအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်! တခြားအလားတူဆော့ဗ်ဝဲကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုကငါ့ရဲ့အီးမေးလ်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်လှည့်စားသည် OST ဖိုင်။
သင်အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်! ယခုငါပြက္ခဒိန်အချက်အလက်ကိုမမှန်ကန်သောတည်ဆောက်မှုမှရနိုင်သည် OST (ပြက္ခဒိန်အချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းမယ့်အစား pst အဖြစ်ခွဲခြားသင့်သည် ost)
Durban, တောင်အာဖရိကဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2019
Ambernath, အိန္ဒိယ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2020
အကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။ ငါ2ပြောင်းရန်ပဲလိုအပ်တယ် OST ဖိုင်များ။ သင်၏ပရိုဂရမ်သာဤအရာကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
မော်စကို, ရုရှားAprilပြီလ 29, 2019
ရီကာဒို Freitas ဗိသုကာဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ
Funchal, ပေါ်တူဂီဇူလိုင်လ 27, 2019
ဒါကဆော့ဖ်ဝဲကြီးတစ်ခုပဲ။ ကျိုးသွားတယ် OST ပထမဆုံးအကြိမ် file file ကိုဖွင့်ပြီး Outlook 2019. တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားပြုပြင်ပြုပြင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲသုံးခုကိုမအောင်မြင်ဘဲကြိုးစားခဲ့ပြီးစာဟောင်းကိုလက်ခံရန်နီးကပ်နေပြီost။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှိုက်ပုံ DataNumen! 😊
CIO လက်အောက်ရှိ Peter Keating, အငြိမ်းစားယူသည်
မဲလ်ဘုန်းမြို့, သြစတြေးလျဇူလိုင်လ 15, 2019
Bohdan Sheretiuk အငြိမ်းစား Marketer အက်စ်အက်စ်ဝန်ဆောင်မှု
Lutsk, ယူကရိန်းအောက်တိုဘာလ 27, 2019
Abdellatif FAJR အထွေထွေမန်နေဂျာစီးပွားရေးလျှောက်လွှာ
Casablanca မော်ရိုကိုဒီဇင်ဘာလ 10, 2019
Mandip Kanjiya အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် Hey Flyer တည်ထောင်သူ http://www.heyflyer.com/
အော့ကလန်, နယူးဇီလန်ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2019
Adelaide, သြစတြေးလျ, ဇွန်လ 27, 2019
အော့ကလန်, နယူးဇီလန်သြဂုတ်လ 23, 2019
Valentin Bogatu ရူပဗေဒပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာ https://helpwithphysics.com
ရိုမေးနီးယားစက်တင်ဘာလ 4, 2019
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုသူမလိုအပ်သူအားအကြံပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2019
အဲရစ်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမျိုးစေ့ Cable နည်းပညာဓာတ်ခွဲခန်း www ။cabal.com
နယူး Brunswick, NJ, USA ဇန်နဝါရီလ 8, 2020
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်အစားထိုးပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုရန်အတွက် PST သို့ပြောင်းလဲထားသော UST ဖိုင်ဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ Softwares တွေထဲမှာ DEXR.EXE ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ UI သည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်း DEXR သည်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်များ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အဆက်အသွယ်အုပ်စုများကိုအမှားအယွင်းမရှိပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ငါကောင်းစွာစိတ်ထဲစောင့်ရှောက်လော့ DATANUMEN ဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူများအတွက်ရည်ညွှန်းအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်အနာဂတ်အတွက်။
အီတလီနိုင်ငံမတ်လ 7, 2020
Eugenio G. အ Bahamondes M.Ss. အကြီးတန်းလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ
NorTecnica Engineers Ltd. Iquique, ချီလီ
Brian Willis အလွတ်ဘာသာပြန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Ryan Foote Nexus အိုင်တီအတိုင်ပင်ခံ
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန် !! ငါသံသယရှိခဲ့ပေမယ့်ရုံ backup လုပ်ထားပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည် zip ကျွန်တော့်ရဲ့အီးမေးလ် archive ကိုပြောင်းပြီး and
စတိဗ် Forrette MarkeTouch မီဒီယာ
အင်တာနက်ပေါ်မှကြီးမားသော sfx ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောသူများအတွက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ရန်အလွန်ကောင်းသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ အဲဒါပြင်တယ် zip ဖိုင်များနှင့် sfx ဖိုင်များသည်ကြီးလှ၏။ ဒါပေမယ့်ဒီဆော့ဗ်ဝဲကပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ် rar ဖိုင်များလည်း🙁
အရမ်းကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါ Sorta 'ငါမကြိုက်တဲ့' no-brainer 'ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Excel spreadsheet ထက် Foxpro ကိုတကယ်သုံးသည်။
အကယ်၍ သင်၏ပရိုဂရမ်ကအလုပ်မလုပ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည် hex or ASCII file viewer ကို အသုံးပြု၍ manual fix ကို အသုံးပြု၍ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုဖြေရှင်းရန် binary ကိုတည်းဖြတ်သည်။ ဖြစ်ပျက်သောဆွဲဆောင်မှု။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ပြောပြီးမင်းရဲ့မဲနဲ့အနာဂတ် PR ကိုရတယ်။
Rick Fayter ဒေတာဘေ့စအတိုင်ပင်ခံ
တကယ်တော့ငါသင်၏ပထမ ဦး ဆုံး 10 မိနစ်အတွင်း၌သင်တို့၏ဖြေရှင်းချက်တွေ့ရှိခဲ့!
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစပိုင်းမှာတော့ဒီဟာကသေးငယ်တဲ့ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုမှာသုံးဖို့ငွေအများကြီးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်၊ DataNumen Access Repair ငါတို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ်ကိုပြန်ဆယ်တင်လို့ရပြီ
မင်းရဲ့ယောက်ျားတွေဆော့ဗ်ဝဲကအရမ်းကောင်းတာပဲငါစမ်းသပ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုငါဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တယ်၊ ငါအတိအကျရှိတဲ့စားပွဲတွေအားလုံးကိုပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။
Kevin Smith အီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်နာ၊ လယ်သမား၊ လျှပ်စစ်၊ ဂီတပညာရှင်
Cleanscape Software အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Albuquerque, NM, USA
DataNumen Excel Repair တစ်နေ့တာကိုသိမ်းဆည်းပြီးကျွန်ုပ်၏ပျက်စီးနေသောဖိုင်မှကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များအတွက်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
အီး Madsen အင်ဂျင်နီယာချုပ်
PIN Technology, Inc နယူးယောက်၊
ကျွန်တော့်ဆီပြန်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါကတည်းက software ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုချက်ချင်း download လုပ်ဖို့ link ကိုရတယ်။ ငါက installed နှင့်တောက်ပအလုပ်လုပ်ခဲ့!
ကီဗင် O'Leary FETAC
Marietta, GA, အမေရိကန်
Justin မော့စ် Applications အင်ဂျင်နီယာ
အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ, အမေရိကန်နိုင်ငံ
Woonst BVBA Geraardsbergen, ဘယ်လ်ဂျီယံ
မာကု Humphrey ကွန်ယက်မန်နေဂျာ
CB Richard Ellis, Toronto, Canada
DataNumen Access Repair ငါအသုံးပြုသောအခြားထုတ်ကုန်ထက်ပိုဒေတာကိုပြန်လည်။ ၎င်းသည်အကျင့်ပျက်ပြားသောဒေတာဘေ့စ်အမြောက်အမြားကိုကယ်တင်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုတွေ့ရလို့ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
မာဂရက် Messick ကို Costစာရင်းအရင်းအမြစ်များ ume
Davis က, CA, USA, ဇွန်လ 16, 2015
၁၀ နာရီကျော်ကြာသောအချိန်တွင် MS ကို Outlook 10 နှင့် ၂၀၁၃ အထိအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် mutiple ၏အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ MS အားပညာပေးရန်အချိန်ဖြုန်းခဲ့သည်။ost ငါနောက်ဆုံးတော့အရှုံးပေးဖိုင်တွေ။ သူတို့ပြောတဲ့အခါမူရင်းကိုမဖွင့်ဘူး။ost ဖိုင်။ ငါထို့နောက်အမြန်ရှာဖွေရေးလုပ်ဖို့တောက်ပစိတ်ကူးတယ်။ost to .pst ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စန်းခြင်း - ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသော ၃.၈GB data အချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ထဲသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်နှင့်အလှမ်းဝေးပါသည်။ သို့သော်သင်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသူထက်သင်ပိုမိုသိပါကသင်ဒုက္ခရောက်နေကြောင်းအလျင်အမြန်တွက်ချက်ရမည်။ အဆင်ပြေတယ်...
RJ Collins တည်ထောင်သူ V360
San Diego မှ, CA, USA မေလ 15, 2015
လီဗာပူးလ်။ UK စက်တင်ဘာ 6, 2014
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းစက်တင်ဘာ ၆ ရက်၊
ယူနိုက်တက်စတိတ်စက်တင်ဘာ 16, 2015
Tübingen, ဂျာမနီစက်တင်ဘာ 13, 2018
ဟူစတန်, TX, USA မေလ 23, 2018
Naperville, IL, USA, ဒီဇင်ဘာ 4, 2018
ရစ်ချတ်ကွန်ယက်ကို Manager ကို Fixsa
စန်တိုဒိုမင်ဂို၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈
သြစတြေးလျဇန်နဝါရီလ 17, 2019
isil yaman baydar ဖြစ်သည်
တူရကီ, တူရကီဇန်နဝါရီလ 29, 2019
ဒါဟာလှလှပပအလုပ်လုပ်ခဲ့! ကျွန်ုပ်၏အသုံးအနှုန်းများနှင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးသော (ပြန်လည်ရှုပ်ထွေးစွာ) အပြန်အလှန်ကိုးကားထားသောအချက်အလက်များအားလုံးသည်ယခုပြန်လာပြီဖြစ်သည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! နွေရာသီအတွင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုလုပ်ကိုင်ရန်အချိန်ရှိသော်လည်း၊tarမကြာမီကျောင်းသို့ပြန်လာနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာအလုပ်ထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွင်ပိုမိုပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် (၇) နှစ်နှင့်ကိုးဆယ့်နှစ်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်အချိန် (သို့မဟုတ်နှလုံးသား) မရှိခဲ့ပါ။ ကိုးကားချက်များ! ငါအလားအလာမှာငါ့အစာအိမ်မှာစာသားနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
Kristi Rankin ဆရာ
Brownwood, Texas, USA, သြဂုတ်လ 13, 2014
မြောက်အမေရိကဗန်ကူးဗား, ဘီစီ, ကနေဒါနိုဝင်ဘာ 1, 2015
ဟူစတန်, TX, USA နိုဝင်ဘာ 1, 2015
Excel ပြုပြင်ရေးကိရိယာသည်ပျက်စီးနေသော Excel ဖိုင် ၂ ခုမှစာသားဒေတာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးကျွန်ုပ် PC ပျက်စီးသွားသောအခါကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော်ဤကိရိယာသည်ပုံစံချခြင်း (ရဲရင့်ခြင်း၊ အရောင်များစသဖြင့်) ဖြင့်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိပါost အတူတူဖော်မြူလာ၏ထက်ဝက်ခန့် (အဓိကအားဖြင့်စာရွက်များကိုပိုမိုချိတ်ဆက်ထားသောရှုပ်ထွေးသော) ။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောပြproblemsနာများရှိပါကကိရိယာသည်ရှိပြီးသားသင်ထောက်ကူစာရွက်များကိုအပိုစာရွက်များအဖြစ်ဖြတ်တောက်ထားခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမည်သည့်နေရာတွင်စစ်ဆေးရမည်ကိုသင်သိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အချက်အလက်များမူရင်းရင်းမြစ်မှပြန်လည်ရယူရန်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဆိုးဝါးသောရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိုင်များ၏တစ်ခုမှာအလွန်ဆိုးရွားလွန်းသောကြောင့်မည်သည့် MS ပရိုဂရမ်နှင့်မဆိုကူးယူခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း (သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ခြင်း!) မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဒီကိရိယာကကျွန်တော့်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလုပ်လုပ်စေခဲ့တယ်။ ဖိုင်များအဟောင်းကိုပြန်လည်ပုံစံချခြင်းနှင့်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ဖိုင်များကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်တစ်ရက်ပင်မကြာ။ အသုံးပြုသူများအတွက်သတိပြုပါ၊ အကယ်၍ ဤ tool သည်ရပ်တန့်ပုံရသည်၊ သည်းခံခြင်းရှိလျှင်ခက်ခဲသောဖိုင်ကိုမဖြေရှင်းမီတစ်နာရီခန့်ကြာသည်။tarTed anythin လုပ်နေတာ
မဲလ်ဘုန်းမြို့, သြစတြေးလျဇန်နဝါရီလ 1st, 2017
Disk Image သည် ISO system image ကိုဖန်တီးရန်ပျက်ကွက်သောအခြားပရိုဂရမ်သုံးခုထက်သာလွန်သည် - ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းကို USB မှမဖွင့်နိုင်သော်လည်းလည်ပတ်နေသော OS မှလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည် ၂ နာရီကျော်အတွင်း 1TB မြန်ဆန်စွာပွားပြီး Clone ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်စွာပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၊ အားနည်းမှုနဲ့သူတို့ပေးတဲ့ကောင်းတဲ့အထောက်အပံ့တွေအကြောင်းသူတို့လိုအပ်နေတဲ့မည်သူ့ကိုမဆိုသူတို့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။
Bost, MA, USA, ဇန်နဝါရီလ 25, 2017 အပေါ်